Qiimaha Saamiga Suuqa Ee Kooxda Juventus Oo Boqolkiiba 22% Sare U Kacay Iyo Saamaynta Cristiano Ronaldo Oo Si Layaableh Turin Looga Dareemay. - GoolTV.Net
Kooxda Juventus ayaa haddaba si buuxda u dhadhamisay saamaynta layaabka leh ee ay ka filan karto saxiixa Cristiano Ronaldo oo la filayo in waqtiyada soo socda ay dhamaystiri doonto heshiiskiisa waxaana arin aan la rumaysan karin noqotay in qiimaha suuqa ee halka saami ee kooxda Juventus uu sare u kacay boqolkiiba 22% saddexdii maalmood ee ugu danbeeyay ee wararka Ronaldo ay sida wayn u sii xoogaysteen.
Kooxda Juventus ayuu qiimaha kooxdeeda ku biiray 160 milyan euros oo dheeraad ahi taas oo la micno ah in wararka suurtogalnimada ay Ronaldo ku haysaa uu saamigii kooxdeeda ee suuqa uu sare u qaaday boqolkiiba 22% taas oo sare u kac cajiib ah noqotay.
Cristiano Ronaldo ayaa haddaba ogaaday in uu Juventus ugu biiro heshiis afar sano ah oo uu kooxda Juventus ugu kici doona 100 milyan euros oo ay Madrid siin doonto iyo waliba 105 milyan euros oo ay Ronaldo mushaar ahaan u siin doonto afarta sano ee soo socda.
Qiimaha kooxda Juventus ayaa markii aanu warka Cristaino Ronaldo soo bixin waxa uu suuqyada ka ahaa €665 milyan euros laakiin saddexdii maalmood ee ugu danbeeyay ee wararka Ronaldo sida layaabka leh u soo xoogaysteen waxa uu qiimaha suuqa ee kooxda Juventus noqday €825 milyan euros.
Marka ay kooxda Juventus dhamaystirto heshiiska Cristiano Ronaldo haddii wax walba sida hadda ay yihiin u socdaan waxaa la filan karaa in qiimaha suuqa ee Juventus uu si wayn sare ugu kici doono iyada oo meel sare ka soo gali doonta kooxaha kubbada cagta aduunka ugu qiimaha badan.
Sida ay qoreen Il Sole 24 Ore iyo Mediaset Premium, haddii uu Ronaldo dhamaystiro heshiiska Juventus waxa uu ka soo muuqan karaa wajiga hore ee shirkada baabuurta soo saarta ee Ferrari taas oo ay lacag badan Old Lady ka samayn karto.
Si kastaba ha ahaatee, kubbada cagta aduunka ayaa si wayn ugu dhegtaagaysa waqtiga ay Juventus iyo Real Madrid si rasmi ah u shaacin doonaan dhamaystirka heshiiska ay hadaba Juve la gaadhay Ronaldo iyada oo waliba wararka qaar sheegayaan in sabtida heshiiskan qalinka lagu duugi doono ay Juventus soo bandhigi karto saxiixa Ronaldo.